Posted by Red's Rose Dream at 11:46
တစ်ခါတလေ အတိတ်ကို ထမ်းပိုးထားရတာက အသက်ရှင်ရတာထက်ကို ပိုပြီး ခက်ခဲပါတယ်.. အတိတ်က အတိတ်အတိုင်းပဲ ထားနိုင်ဖို့ အတော်ကြီးမလွယ်တဲ့ကိစ္စပေါ့... အတိတ်က အဲ့ဒီလောက်မဆိုးပေမယ့် ထမ်းပိုးထားရတဲ့ဒဏ်က အတော်လေးဆိုးပါတယ်... ထမ်းပိုးထားတဲ့ အချိန်က လူကိုပိုပြီး ပင်ပန်းစေပါတယ်...
ကျွန်မအကျင့်ဆိုးတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အတိတ်ကို ထမ်းပိုးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် နားကျင်နေစေချင်းပါပဲ... ဒါမှလည်း ကျွန်မရဲ့ ရှုံးနိမ့်ခြင်းတွေကို အမှတ်ရနေစေမယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တာကို... ဒါက ကျွန်မကို ပိုပြီး နာကျင် စေမယ်လို့ အရင်ကလုံးဝမတွေးခဲ့မိဘူး........အခုနောက်ပိုင်း နားလည်း လိုက်တာက အတိတ်ကို လွတ်ချလိုက်တာက ကျွန်မကိုကျွန်မ တုပ်နှောင်ထားတဲ့ ကြိုးတွေက ဖြေပေးလိုက်တာပဲလို့... ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ လွတ်မြောက်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာပဲဆိုတာကိုပါ...
အတိတ်မှာ နာကျင်ကြေကွဲနေမယ့်အစား အနာဂါတ်အသစ်လေးကို ကျွန်မကြိုဆိုသင့်သပေါ့... ထမ်းပိုးထား ရတာကြာလို့ ကျွဲပခုံးထနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ၊ နှလုံးသာတွေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် မွေးမြူသင့်သပေါ့နော်...
ကျွန်မလည်း ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ်လို့...
Reminding myself not locked in the past...
I should keep forward...
And I deserve Happy..,
And I am worth it !
စင်္ကာပူမှာနေခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကာလကို ဘယ်တုန်းကမှ ကောင်းတယ်လို့ မမြင်ခဲ့သလို ငရဲနီးနီးထင်ခဲ့တာ ဒီလို စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာပါ.. ဒါပေမယ့် ဘ၀အတွက် ကောင်းတာလေးတွေ အမှတ်ရတာလေးတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ်လို့လည်း ၀န်ခံရပါမယ်..
ဘ၀အတွက် တသက်လုံးအတွက် သင်ခန်းစာတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ ကျွန်းလေးပေါ်က အချိန်တွေကို ပြန်တွေးရင် ငါ ပျော်ပျော်နေခဲ့ရ အကောင်းသားလို့ .. အခုတော့လည်း .. ပြီးခဲ့တာတွေက ပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့လေ... အရာရာကို အမြဲ သံသယရှိပြီး စိုးရိမ်ပူပန်တက်တဲ့ စိတ်က ကျွန်မကို မပျော်ရွှင်အောင် ဖန်တီးခဲ့မှန်း အချိန်အတော်ကြာမှသိခဲ့ရတာ.. ကျွန်မလုပ်စရာတော်တော် များများကိုလည်း မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး...ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက နောက်ကျွန်မ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို အမှားအယွင်းမရှိအောင် ကူညီထောက်မပေးနေပါတယ်.. အဲ့ဒီအတွက် ကြုံတွေ့ခဲ့သမျှ သင်ခန်းစာအားလုံးကို ကျွန်မက ကျေးဇူးတောင် တင်မိပါတယ်.. ငါ ဒါမျိုးကြုံဖူးတယ် ဒီလို အတွေ့အကြုံမျိုး ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုး မြင်တက်ခံယူတက်သွားတယ်.. မဟုတ်ရင် ကျွန်မက လောကကြီးကို ပန်းခင်းလမ်းလို့ မြင်နေမိမှာ... ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေကပြောတာ အတွေ့အကြုံ ဆိုတာ အတွေ့အကြုံပဲ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ဆိုပြီးပြောဆို ခိုင်းနှိုင်း လို့မရဘူးလို့.. ဒါတွေအားလုံး ကျွန်မအတွက် လိုအပ်လို့ဖြစ်လာတာလို့ မြင်နိုင်ရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်လို့.... ဒီနေ့ တကယ်ကို ကျွန်မဆီကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်...
Posted by Red's Rose Dream at 01:15
တစ်ခါတလေ ကိုယ်ကတပါးသူ စိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့ ညှာလိုက်တိုင်း ကိုယ်ချည်းပဲ ခံစားရတယ်.. ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်လာဖန်များတော့ နောက်ဆုတ်ဖို့ကို အတော်ကြီး စဉ်းစားဖြစ်လာတယ်... လူတွေပြော
နေတဲ့ ရင့်ကျတ်တယ်ဆိုတာ ရှိပြီးသား၊ ဖြူပြီးသား မွေးရာပါ လူ့စိတ်ကို မွံမံအရောင်ဆိုးလိုက်တာ
ထင်ပါရဲ့.... မဖြစ်မနေဆိုရင်...အရောင်ဆိုးမှ သက်ဆိုးရှည်မယ်ဆိုတော့လည်း ဆိုးလိုက်ရတာပေါ့လေ
ငါကတော့ အဖြူရောင်သက်သက်ကိုပဲကြိုက်ပါတယ်.... အရောင်လည်း မဆိုးချင်ဘူး မိုးခါးရေလည်း
မသောက်ချင်ဘူး... အဖြူရောင်သက်သက် ပဲလိုချင်သလို ရိုးရိုးရေပဲသောက်ချင်တယ်.... ကံကြမ္မာ